जीवनमा अगाडि कसरी बढ्ने ? - साक्षी खबर जीवनमा अगाडि कसरी बढ्ने ? - साक्षी खबर
जीवनमा अगाडि कसरी बढ्ने ?
माघ १८, २०७७ | १०७ पटक पढिएको
१८ माघ, एजेन्सी– जीवनमा त्यस्तो मानिस को होला जसलाई अगाडि बढ्न मन नहोस् ? तर, कसैले पनि आफ्नो यात्रालाई अगाडि त्यति बेला मात्र लैजान सक्छ जब उसले आफूमा भएको ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सक्छ । जसले आफूभित्र भएको ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सक्दैन वा यसलाई प्रयोग गर्ने चाहना पनि राख्दैन, उसले जीवनमा केही नयाँ गर्न पनि सक्दैन ।
यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको चिन्ताको व्यवस्थापन हो । जो मानिस सफल हुन चाहन्छ, उसले चिन्ता धेरै लिनु हुँदैन । बरु विभिन्न साधनाहरु उसले गर्न सक्छ, उसले आफूमा शक्ति संचयनको काम गर्न सक्छ । तर, जुन दिन मानिस ज्यादा चिन्तित हुन्छ, त्यो दिन उसले बढी थकाइ महसुस गरेको हुन्छ ।
मानिसले प्रत्येक दिन ससाना कुराको ख्याल गर्दा पनि हुन्छ । जस्तै कि एक दिनमा तपाईं कति शब्द बोल्नुहुन्छ ? कुनै एक दिन त्यसको आधा शब्द बोल्ने प्रयास गर्नहोस्, यसले तपाईंको शब्द प्रयोगमा अझ बढी सुन्दर बनाउन सक्छ । अर्कोतिर आफ्ना लागि मानिसले आफ्नै विचारको विकास गर्नुपर्छ । जब मानिसमा आफ्नो विचार हुँदैन, उसले अर्काको विचारमा बाँच्ने प्रयास गरेको हुन्छ । यसले सफलतामा पुर्याउन सक्दैन ।
अर्को कुरा मानिसले आफ्नो साहरालाई नै आफ्ने शक्ति सोच्नु हुँदैन । जस्तो कि कसैले एउटा छडीको साहरा लिएको छ भने उसले त्यसलाई नै आफ्नो शक्तिका रुपमा सोच्नु हुँदैन । खासमा शक्ति त मानिस आफैं हो, छडी त उसको लागि साहरा मात्र हो ।
दम्पतीबीचको उमेर कति वर्षले अन्तर हुनुपर्छ ?
छोरी हुनु अभिसाप हो र ?
म भित्रको जिन्दगी